Fanarenana ny tsenan'ny hotely: Jereo any Alemana, Espana ary Gresy
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana Eoropeana » Fanarenana ny tsenan'ny hotely: Jereo any Alemana, Espana ary Gresy
Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovao Mafana Alemana • Vaovao Mafana Gresy • Hospitality Industry • Hotels & Resorts • Vaovao • fanorenana • Resorts • Vaovao Mafana Espaniola • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny
Ny vidin'ny trano fandraisam-bahiny dia mijanona tsy miova mandritra ny krizy COVID-19, ary ny manampahaizana manokana amin'ny indostria dia manantena ny fanarenana tanteraka ny tsenan'ny hotely iraisam-pirenena amin'ny 2024.
Miaraka amin'ny ankamaroan'ny mpandraharaha trano fandraisam-bahiny manana fe-potoana nohavaozina ny fanofana, nosakanana fatiantoka lehibe tamin'ny tsena maro.
Ny fanadihadiana nataon'ny Tranio dia manome fanazavana momba ny fivoaran'ny sehatra.
Tamin'ny volana 2021, Tranio tafaraka tamin'ny International Hotel Investment Forum (IHIF) hanaovana fanadihadiana iraisana amin'ny fiantraikan'ny valan'aretina COVID-19 manerantany amin'ny sehatry ny fandraisam-bahiny nanomboka ny volana martsa 2020, ary ny aotra ny azontsika antenaina amin'ny tsena mandroso.
Ny fanadihadiana dia nanolotra maherin'ny 160 ireo matihanina indostrialy manerana an'i Eropa miaraka amin'ny fanontaniana kendrena amin'ny famoronana fahatakarana feno ny filan'ny nofo, ny fahatsapana ary ny anton-javatra hafa manohana ny fampiasam-bola iraisam-pirenena momba ny fananan-tany hatramin'ny nanombohan'ny areti-mandringana.
Ny ankamaroan'ny mpandray anjara tamin'ny fanadihadiana (59%) dia matihanina amin'ny trano sy ny fampiantranoana, ny 16% dia mpiasan'ny hotely, 13% no nanondro ny tenany ho mpampiasa vola. Ny sokajy 'Hafa' (12%) dia misy matihanina amin'ny indostria hafa, toy ny mpanolotsaina fampiasam-bola, mpampianatra oniversite ary mpanao gazety.
Ny fanadihadiana dia nanambara fa ny ankamaroan'ny manam-pahaizana dia manantena fa hiverina amin'ny laoniny ny indostrian'ny fandraisam-bahiny ao anatin'ny telo taona, na dia miankina amin'ny tahan'ny vaksiny aza ny zava-misy any amin'ny firenena sasany. Ny valin-kafatra dia nahatsapa fa ny tsena Alemanina, Espaniôla ary Gresy dia hanaporofo ny mahavelom-bolo kokoa noho ny hafa amin'ny resaka famerenana haingana. Ho fanampin'izany, ireo nuansa amin'ny valintenin'ireo mpamaly dia manome fanazavana ny kitapo fomba fijery mifangaro izay milalao eny an-tsena.
ao amin'ny Etazonia 21 amin'ny 25 Mihena ny tsenan'ny hotely.
52% no mino fa hiverina amin'ny 2024 ny tsenan'ny hotely
Ny ankamaroan'ireo namaly dia naneho ny finoany fa ny tsenan'ny fandraisam-bahiny dia hiverina amin'ny ambaratonga alohan'ny krizy ao anatin'ny telo taona. Mihoatra ny antsasaky ny - 52% - amin'ireo mpandray anjara no maminavina ny fiverenana amin'ny ara-dalàna amin'ny 2024, raha misy 32% kosa dia manantena fa hiverina amin'ny ambaratonga mialoha ny areti-mandringana amin'ny 2023.
Latsaky ny 7% no manantena ny fahasitranana tanteraka amin'ny 2022. Ny iray amin'ireo mpandray anjara, Alexander Schneider avy amin'ny Nikki Beach Hotels and Resorts, dia manantena fa ny tsenan'ny fialam-boly dia hanana iray amin'ireo taona matanjaka indrindra amin'ny 2022. Fa ny hafa kosa mailo kokoa amin'ny faminaniany. Ny valinteny iray izay tsy nanambara ny anarany dia nanambara fa ny trano fandraisam-bahiny amin'ny sehatry ny fizahan-tany goavambe dia ho sitrana ihany raha miakatra ny vidiny ary miova ny maodelin'ny asa.
Marihina fa ireo mpandraharaha hôtely dia toa ny be fanantenana indrindra: ny 44% dia nizara roa niandrasana ny fahasitranana tanteraka tamin'ny 2023 na 2024, raha 6% kosa no nifidy ny 2022 ho toy ny taona izay hiverina amin'ny ara-dalàna. Ny mpampiasa vola kosa dia mailo kokoa. Ny ankamaroan'ny mpampiasa vola (87%) dia manantena ny ho sitrana ao anatin'ny telo taona ho avy ary tsy misy mino fa hitranga amin'ny 2022 izany.
Anisan'ireo matihanina momba ny tany sy ny fandraisana vahiny, 51% no manantena fa hiverina amin'ny laoniny ny tsena amin'ny 2024, raha 35% kosa mino fa hitranga aloha kokoa izany, amin'ny 2023. Manodidina ny 5% no manantena ny hiverina amin'ny ara-dalàna ny tsena amin'ny 2022, raha 5% kosa no mieritreritra azy hitranga eo anelanelan'ny 2026 sy 2030.
Na dia tsy manantena fahasitranana haingana aza ny ankamaroan'ny mpampiasa vola, ny ankamaroan'izy ireo dia manantena ny sehatry ny hôtely amin'ny taona ho avy - fironana iray izay asehon'ny mazava tsara amin'ny Hospitality Insights tatitra ho an'ny telovolana faharoa tamin'ny 2021. 85% ny mpamatsy vola, araka ny tatitra, no naneho fomba fijery miabo tsara ho an'ny indostrian'ny hotely, raha 13% kosa tsy miandany ary 2% ihany no tsy mino. Hospitality Insights dia nanara-maso ny fahatsapan'ny mpividy sy ny mpivarotra tao amin'ny sehatry ny hôtely hatramin'ny nanombohan'ny areti-mandringana. Ny trano fandraisam-bahiny mitazona ny tampon'ny lisitra amin'ny telovolana fahatelo nisesy ho toy ny fotoana mety indrindra amin'ny fampiasam-bola mandritra ny 12 volana manaraka, arahin'ny trano sy trano fandraisam-bahiny misy serivisy.
Mino ireo matihanina fa hahita ny fanarenana haingana indrindra amin'ny orinasa hotely i Alemania sy Espana
Maherin'ny ampahatelony (35%) ny valinteny dia mino fa hiverina haingana kokoa ny tsena Alemanina noho ny hafa. 30% eo ho eo no mino fa ho sitrana haingana ihany koa ny tsena espaniola.
Teo amin'ireo mpandraharaha trano fandraisam-bahiny, 31% no nifidy an'i Alemana, ary ny 25% dia samy nanondro an'i Gresy, Italia ary Espana. Maherin'ny ampahefatry ny, 27% amin'ireo matihanina amin'ny fananan-tany na ny fandraisam-bahiny no mihevitra fa i Gresy no haingana indrindra sitrana nefa ny maro an'isa dia mbola nifidy an'i Alemana sy Espana ihany.
Maherin'ny roa ampahatelon'ny mpampiasa vola - 69% - no naneho ny fahatokisany indrindra ny tsena UK, raha ny ambiny kosa dia nantsoina an'i Alemana sy Gresy. Araka ny tatitra farany nataon'ny STR, ny sehatry ny fandraisana vahiny any Angletera dia mampiseho ny taha ambony indrindra amin'ny famerenana amin'ny laoniny any Eropa, tarihan'ny hotely fialantsasatra fialamboly.
Ny sasany tamin'ireo namaly ireo, izay nisafidy “hafa”, dia nanonona ny hevitr'i Etazonia, Azia amin'ny ankapobeny, ary Tiorkia ary Sina manokana. Kirk Pankey, filoha sady talen'ny talen'ny fandraisam-bahiny Lagundi, dia nanatitrantitra fa ireo firenena be vaksiny dia hanana fanarenana haingana indrindra.
Ny vidin'ny hotely dia nijanona tsy niova
Ny vidin'ny fividianana trano fandraisam-bahiny dia nijanona tsy niova na nianjera 5% na latsaka, raha ny habetsahan'ny maro an'isa (78.6%).
Raha ny fiovan'ny vidin-javatra dia tsy mitovy ny hevitr'ireo vondrona nanaovana fanadihadiana. Ireo mpandraharaha hotely dia nahitana ny vondrona pessimistic indrindra, 44% ihany no nanapa-kevitra fa tsy niova ny vidiny na latsaka hatramin'ny 5%. Mandritra izany fotoana izany, 38% amin'ireo mpandraharaha no mino fa nilatsaka mihoatra ny 15% na 20% mihitsy aza ny vidiny. Mandritra izany fotoana izany, ny 85% amin'ny matihanina amin'ny trano sy ny fandraisam-bahiny ary 81% ny mpampiasa vola dia mihevitra fa tsy niova ny vidim-piainana na nilatsaka 5% teo ho eo.
Ny tahirin-kevitra be dia be azo tamin'ny valim-pifidianana dia notohanan'ny mpiara-mitantana an'i Tranio George Kachmazov, izay nanamafy fa tsy azo atao mihitsy amin'izao fotoana izao ny mividy fananana hotely manana kalitao amin'ny toerana tsara amin'ny vidiny ambany, na eo aza ny krizy mitohy eo amin'ny tsena.
"Betsaka ny mpamily misy fiatraikany amin'ny vidiny: ny fahafoizan-tena eny an-tsena dia ivelan'ny tabilao amin'ny lafiny lehibe, vokatry ny politika ara-bola an'ny fanjakana. Ny banky, izany hoe ny tompon'ny indram-bola arovan'ny trano fandraisam-bahiny, dia tsy mivadika amin'ny tompon-trano. Matetika izy ireo dia misoroka ny fisamborana antoka, ary koa manome deferment findramam-bola. Amin'ny ankapobeny, mba hividianana trano fandraisam-bahiny anio amin'ny fihenam-bidy mafy (miaraka amin'ny fidiram-bola 6% na avo kokoa), ny olona dia tokony hijery tetikasa any amin'ny toerana tsy dia tsara fa tsy haben'ny andrim-panjakana na mila havaozina. Ary koa, ny fananana manana ampaham-bola be amin'ny MICE dia azo vidiana izao amin'ny fihenam-bidy mihoatra ny 10-20% amin'ny vidiny mialoha ny fivarotana. Ho an'ireo fananana lehibe any amin'ny toerana ambony misy fepetra tsara, ny fihenam-bidy avo indrindra azo raisina amin'izao fotoana izao dia 5-7%, araka ny vinavinany, "hoy i Kachmazov.
Ny valinteny hafa dia nanambara fa misy elanelam-bidin'ny fangatahana amin'ny vidin'ny trano fandraisam-bahiny. “Ny tompona manala ny hetaheta amin'ny fanohanan'ny governemanta dia hamorona fanitsiana sy fanaintainana be dia be avy amin'ny sehatra. Ny tsenan'ny fifanakalozana dia mbola mijanona ho fampihetseham-po ", hoy ny iray amin'ireo mpampiasa vola.
Ny ankamaroan'ny mpandraharaha trano fandraisam-bahiny dia nanao fanadihadiana fa nilaza izy ireo fa nifampiresaka indray ny fe-potoam-panofanany
Ity fanadihadiana ity dia manambara ihany koa ny fandraisan'ny mpandraharaha ny areti-mifindra. Ny ankamaroan'ireo nandray anjara tamin'ny fanadihadiana (70%) dia nanondro fa ny mpandraharaha dia namerina nametra ny fe-potoana fanofana. Ny mpandraharaha mihitsy no nisafidy an'ity safidy ity amin'ny tranga manodidina ny 59%, araka ny valinteninay. Ho an'ny mpampiasa vola dia 63% io tarehimarika io ary ho an'ny matihanina amin'ny trano dia 74% izany.
Ny valin'ny valiny 'Tsy nandoa hofan-trano' dia samy hafa amin'ny anton-javatra roa: ny mpandraharaha mihitsy no nisafidy an'io valiny io tamin'ny tranga 13% fotsiny, raha toa kosa ny mpampiasa vola sy ny matihanina amin'ny trano dia nanome an'ity valiny ity tamin'ny 26% sy 25% tranga. .
Vahaolana malaza ho an'ny mpandraharaha mandritra ny areti-mandringana dia nivadika fifanarahana hybrid sy fifanarahana fitantanana amin'ny tompony, miaraka amin'ny 34% sy 9% amin'ireo mpamaly rehetra no manome ireo valiny ireo. Mandritra izany fotoana izany, ny mpandraharaha mihitsy no nisafidy ireo safidy ireo tao anatin'ny 18% (mifamadika amin'ny fifanarahana hybrid) sy 5% (fifanarahana fitantanana) tranga iray ihany.
Hotely maro no nivadika fanofana antonony sy maharitra nandritra ny areti-mandringana
Manakaiky ny antsasaky, na 41%, ny valinteny dia mino fa trano fandraisam-bahiny maro no nankafy ny fanofana trano antonony sy maharitra nandritra ny areti-mandringana. Ho fanampin'izany, 32% amin'ireo manam-pahaizana no nino fa hotely maro no navadika ho toerana fiasan'ny mpiara-miasa, ary 17% no nanokatra lakozia matoatoa na fivarotana maizina.
"Ny fiovana lehibe hivoahana amin'ny areti-mandringana dia ny fiakaran'ny trano maharitra amin'ny alàlan'ny rojo lehibe manitsy ny fanolorany hipetrahan'ny vahiny maharitra", hoy ny iray tamin'ireo mpandray anjara tamin'ny fanadihadiana.
10.2% ihany no nanombatombana fa trano fandraisam-bahiny maro no navadika ho trano fisotroan-dronono, na eo aza ny fitomboan'ny fangatahana trano ho an'ny zokiolona. Raha ny filazan'ireo manampahaizana manokana ao Tranio dia tsy azo atao ny manova ny trano fandraisam-bahiny ho trano fisotroan-dronono noho ny fepetra teknika samihafa na ny toerana tsy mety.
Ny sasany amin'ireo matihanina momba ny trano sy fandraisam-bahiny eo amin'ireo mpiorina anay dia nanipika fa nivadika trano fialofana ireo trano fandraisam-bahiny, nanome trano ho an'ny mpiasan'ny fahasalamana na nanokatra foibe fitiliana COVID. "Nikatona ny ankamaroan'ny trano fandraisam-bahiny, ary vitsivitsy ihany no nanolotra serivisy ho an'ny daholobe," hoy i Joan E. Capella, Tale M&A ho an'ny Iberolat Consulting & Investment.
Ny fanatsarana ny tahan'ny fanaovana vaksiny dia hamily ny tsenan'ny hotely
Raha nanontaniana izy ireo hoe inona no heverin'izy ireo fa hahatonga ny fahasitranana aorian'ny areti-mandringana, dia nanondro ny tahan'ny vaksiny ireo mpamaly. Na dia maro aza ny valiny mety hitranga amin'ity fanontaniana ity, 71% amin'ireo namaly no nilaza fa ny tahan'ny fanaovana vaksiny no tena misy dikany. Ny fifohazan'ny fizahan-tany iraisam-pirenena sy ny toekarena manerantany no valiny malaza indrindra manaraka, nahitana 58% sy 46%, avy. Ho fanampin'izany, 23% no mino fa ny tsenan'ny hotely dia hahazo fampiroboroboana amin'ny fampidirana indray ny fampirantiana sy ny hetsika ara-barotra. Nilaza ny iray amin'ireo manam-pahaizana fa ho sitrana ihany ny fizahan-tany eo amin'ny sehatry ny fandraharahana "raha esorina ny fameperana ny dia ary raha mihoatra ny 80% ny isan'ireo olona vita vaksiny."
Ny iray tamin'ireo namaly dia nilaza ny teknolojia tsy misy fikitika sy AI ho isan'ireo fitaovana afaka manova 'ny fizahantany sy ny fomba fandraisam-bahiny ho an'ny entana'.
Ny mpandray anjara sasany dia nanondro fa ny fanohanan'ny governemanta, indrindra any Irlandy sy Slovenia, dia nanampy ny sehatry ny fandraisana vahiny hiaina mandritra ny fotoan-tsarotra. Ny solontenan'ny maso ivoho Slovenia Investmond dia nilaza fa tany Slovenia dia nahazo tapakila avy amin'ny fanjakana izay mamela ny hotely ao an-toerana ho feno 100%. "Ny tsenan'ny trano sy tany any Slovenia dia nahitana fiakarana 40% hatramin'ny Janoary ka hatramin'ny Aogositra 2021," hoy izy ireo.
"Raha ny hevitro, ankoatry ny fanarenana ara-toekarena ankapobeny, ny fampitomboana ny fizahan-tany amin'ny firenena tsirairay avy dia handray anjara amin'ny fanarenana haingana ny tsenan'ny hotely hatramin'ny 2022," hoy i Detlef Lauterbach avy ao amin'ny DelA.
Izahay eto Tranio dia mino ihany koa amin'ny famerenana amin'ny laoniny ny orinasan'ny hotely ary mitady fotoana hividianana hotely kely mila fanavaozana amin'ny fihenam-bidy ary manomana azy ireo amin'ny fotoanan'ny fanarenana tsena - hanavao, hanatsara ary hanao nomerika ny serivisy.